पोखरामा ‘पेनगन’ भेटिएको छ । लागूऔषध कारोबारीको साथमा ‘पेनगन’ भेटिएको हो ।
प्रहरीले पेनगन र लागूऔषधसहित कास्कीकोटका सागर रानाभाटलाई पोखराको मासबारबाट पक्राउ गरेको छ । उनको साथबाट लागुऔषधसहित एक थान ‘पेनगन’ र ०.२२ एमएमका सातवटा बुलेट पनि बरामद गरिएको छ ।
यसअघि पनि लागूऔषध कारोबारकै मुद्दामा सजाय पाएर छुटेका रानाभाटसँग प्रहरीले १० वटा पासपोर्ट र सातवटा नागरिकता पनि बरामद गरेको छ । रानाभाटको साथबाट फेनागरगन ६० थान, ब्रुपिनर्फिन ६०, डाइजेपाम ६० र नाइट्रोसन १५ चक्की फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार काठमाडौंपछि दोश्रोपटक पोखरामा पेनगन फेला परेको हो । “पहिले हामीलाई यो ठाउँमा लागूऔषध कारोबारी छन् भन्ने सूचना पाएपछि हामीले नेटवर्किङ, नेक्सस हे¥यौं । सोही आधारमा रानाभाट पहिले पनि यस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइयो । खानतलासी गर्ने क्रममा ‘पेनगन’ पनि भेटेका हौं,” कार्कीले भने ।
‘पेनगन’ हेर्दा दैनिक प्रयोगमा आउने सामान्य पेनजस्तै आकारको देखिन्छ । रिफिल हुने ठाउँमा स्प्रिङ र आउटरमा बुलेट राख्न मिल्छ । पेनको क्लिपले ट्रिगरको काम गर्छ ।
प्रहरीका अनुसार फिल्ममा प्रयोग हुने ‘पेनगन’ नजिकको दूरीबाट मान्छे मार्न प्रयोग गरिन्छ । एसपी कार्कीले भने, “लागूऔषध कारोबारीले आफूले प्रयोग गर्न, धम्क्याउनको लागि, लागूऔषध कारोबार चलाउने उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न राखेको हुनसक्छ ।”
यसअघि ०६८ साल असारमा ‘पेनगन’सहित काठमाडौंबाट दुईजना युवा पक्राउ परेका थिए । मुलुकमै दोश्रोपटक फेला परेको पेनगन नेपालमा नबन्ने र भारतीय नक्सलवादीहरुले प्रयोग गर्दै आएको प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् । कास्की प्रहरी प्रमुख कार्कीले भने, “पेनगन कहाँबाट ल्याइएको ठ्याक्कै यकिन गर्न सकिँदैन, अनुसन्धान गर्दैछौँ, तर नेपालमा भने यो बन्दैन ।”
श्रीमती हत्याको अभियोगमा चार पक्राउ
पोखरा–१५ कान्तिपुर चोक निवासी २७ वर्षीय लक्ष्मी परियार नेपालीको हत्यामा संलग्न उनकै श्रीमान्सहित ४ जनालाई कास्की प्रहरीले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नै श्रीमतीको हत्याका मुख्य योजनाकार रमेश परियारसहित उक्त घटनामा संलग्न भएका ४ जनालाई प्रहरीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरेको हो ।
करिब एक वर्ष अघिदेखि साली अनु परियारको सम्बन्ध बढ्दै गएपछि उनकी सालीले दिदीलाई साइड लगाउनु भनेको आधारमा लक्ष्मीका श्रीमान् रमेश नेपालीले आफ्ना साथीभाइसहित भारतिय नागरिकहरु समेत प्रयोग गरी श्रीमतीको हत्या गराएको कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीले बताए ।
उक्त घटनामा संलग्न भएका भोजपुर जिल्ला भोजपुर नगरपालिका ५ बैंकरोड घर भई हाल पोखरा ९ महेन्द्रपुल बस्ने ३२ वर्षका संजय शर्मा, सर्लाही ईश्वरपुर न.पा. ३ तिनघरिया घर भई हाल पोखरा ८ पृथ्वीचोक बस्ने २६ बर्षीय चित रञ्जन कुमार साह र रमेशकी साली गोरखा गण्डकी गाँउपालिका वडा नं. ७ घ्यालचोककी १९ बर्षीया अनु परियारलाई कास्की प्रहरीले उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा सार्वजनिक गरेको हो ।
असार १ गतेदेखि हराईरहेकी रमेश नेपालीको श्रीमती लक्ष्मी नेपालीको खोजतलाशको क्रममा २५ औंं दिनमा पोखरा महानगरपालिका बडा नं २२ कर्कलको जंगलमा कंकालमात्र भेटिएको थियो ।